loft @ isikwere senkundla - I-Airbnb
loft @ isikwere senkundla
loft @ courthouse square ibekwe kwimbali yedolophu yaseCharleston, IL. Igumbi lokulala elinegumbi lokuhlambela elinegumbi lokuhlambela elinye libekwe ngaphezulu kwendawo yokuthengisa kunye nomgama wokuhamba weendawo zokutyela kunye nobomi basebusuku. Indawo ihlaziywa ngokupheleleyo nazo zonke izibonelelo zale mihla ngelixa igcina ukubaluleka kwembali yesakhiwo. Iyilwe ngobuchwephesha ihonjisiwe, le ndlu yindlu enesitayile, enobunewunewu kude nekhaya.
loft @ courthouse square ibekwe kufutshane neYunivesithi yaseMpuma Illinois, indawo yengxoxo yeLincoln Douglas kunye nemyuziyam, iLincoln Log Cabin kunye neFox Ridge State Parks kunye neLake Charleston. ILake Shelbyville kunye ne-Illinois Amish Country ikwakuhambo olufutshane.
EIU campus 1.0 imayile
Lincoln Douglas Ingxoxo Museum / Coles County Fair Grounds .7 miles
ILincoln Log Cabin State Site Historic Site 15.6 miles
Fox Ridge State Park 8.0 miles
Lake Shelbyville 35.9 miles
Amish Country 19.8 miles
Willard Airport 45.3 miles
Ifumaneka kwisikwere sedolophu yakudala, kukho iinketho ezininzi zokutyela, iivenkile ezizodwa (kubandakanywa nezinto zakudala kunye nokuhombisa ikhaya) kunye nemivalo ngaphakathi komgama wokuhamba. Indawo esembindini wedolophu yinkundla entle yasebrownstone eyakhiwa ngo-1898.
Umntu uya kuhlala ekhona ukuba iindwendwe zidinga nantoni na.